Naqshadeynta Buugga Ganacsiga 'Show Show' - Ha iloobin Walxahaas Muhiimka ah
In kasta oo aan diiradda saareyno istiraatiijiyadda nuxurka ee macaamiisheenna, waxaan had iyo jeer ku dhiirrigelinnay inay ka soo qayb galaan shirarka warshadaha iyo bandhigyada ganacsiga. Bandhigyada ganacsiga waxay leeyihiin saameyn aan caadi aheyn oo ku saabsan dhismaha wacyiga astaantaada oo leh dhagaystayaal maxaabiis ah oo aad ugu habboon in lagu baaro go'aankooda soo socda ee iibsashada marka loo eego celceliska booqdaha bartaada. Xaqiiqdii, 81% kaqeybgalayaasha bandhigga ganacsiga ayaa leh awood iibsi iyo 99% suuqleyda ayaa qiimeeyay joogitaanka halkaas
Bandhigyada ganacsiga iyo bandhigyada ayaa qiimo weyn ugu fadhiya ganacsi kasta, maaddaama ay u oggolaanayaan is-waji ka waji iyo fursadaha isku-xirnaanta, ee ganacsiyada badani u qaataan maalmahan. Hadday la xiriireyso macaamiisha jirta, ku dhiirrigelinta adeegyadaada rajooyinka cusub ama ku muujineyso astaantaada shaqsiyaadka muhiimka u ah warshadahaaga, bandhigyada ganacsigu waa kuwo qiimo u leh ganacsiyada waana inaan marna la iska indhatirin. Losberger
Our hay'adda waxay u habeysay waabab show ganacsi dhowr qof oo macaamiil ah. Farsamaynta naqshadaynta waabku caadi ahaan waa iska fudud yihiin. Bixiyeyaasha 'Booth' waxay caadi ahaan leeyihiin dhammaan feylasha naqshadeynta si ay ugu wareejiyaan naqshadeeyahaaga qaabeynta qaab-dhismeedka. Si kastaba ha noqotee, qaabeynta saameynta ugu badan waxay u baahan tahay xoogaa hibo ah. Waa kuwan 8 walxood oo ay Losberger ka heshay naqshadaynta qol ganacsi oo wax ku ool ah:
Attention - bandhigyada ayaa loo baahan yahay in la dhigo si ay uga qayb galaan martida 3 ilbiriqsi gudahood.
Warshadaha - waa inuu la jaanqaadi karaa waababka kale ee warshadaha iyadoo wali taagan.
la barbardhigo - qoraalka aadka u kala duwan ayaa lagama maarmaan u ah in si fudud isha meel fog looga qabto.
Colors - isticmaal midabada dabeecadaha kiciya inaad raadineyso kaqeybgalayaasha bandhigga ganacsiga.
Space - boorarkaaga, shaashadahaaga, iyo dammaanaddaada si siman oo furan halkii aad ka xoqi lahayd macluumaad badan oo la eegay.
brandingeksperten - waa inuu ahaadaa mid iswaafaqsan calaamadahaaga, dammaanaddaada, iyo websaydhkaaga.
Graphics - waa inuu gabi ahaanba ahaadaa mid fudud oo meel fog laga arki karaa si uu dareenka ugu soo jiito farriinta cad.
Noocyada - waa inuu noqdaa mid ballaaran, si fududna loo akhrin karo, oo si weyn uga geddisan midabada asalka ah.
Waxaan ku dari lahaa hal talo oo dheeri ah… si aad u ogaato inta nadiifin ah ee aad ku leedahay xarunta shirarka isla markaana ka faa'iideysato booska qolkaaga kore. Xarumaha shirarka badankood waxay oggol yihiin in la sudho calaamadda nalka nooc ka mid ah - taas oo faa'iido weyn u noqon karta hoolka mashquulka badan. Xogta Losberger, Waa maxay sababta Bandhigyada Ganacsi ay muhiim ugu yihiin ganacsigaaga, sidoo kale waxaa ku jira xeerarka Boqortooyada Midowday, tallaabooyinka nabadgelyada, noocyada teendhooyinka iyo waababyada, faa'iidooyinka dhismayaasha ku-meel-gaarka ah, iyo talooyinka kale ee diyaarinta!
Tags: naqshadda waabNaqshadaynta qolka shirarkakhasaaronaqshadda teendhadabandhig ganacsiwaab ganacsinaqshadda waab ganacsixeerarka waabyada ganacsigatalooyinka waababka ganacsigadharka show ganacsiganaqshadda teendhada ganacsiga
Jun 18, 2016 saacadu markay ahayd 11:54 AM
Kuwani waa tilmaamo aad u fiican. Waxaad dooneysaa inaad dadka ku soo jiidato qolkaaga, laakiin waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso wixii xaddidan ee xarunta shirarka ah oo aad hubiso inaad ku dhegan tahay astaan. Waad ku mahadsantahay wadaagista.